Kooxihii u horreeyey ee diiwaangelinta Gobolka Sool oo galabta ka ambabaxay Burco | Somaliland.Org
December 31, 2008	Burco (Somaliland.org) – Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in kooxihii diwaangelinta ee ka hawl gelayay gobolka Sool ay maanta ka ambabaxeen magaalada Burco oo Komishanku ka dhigtay saldhig ku meel-gaadh ah inta diiwaangelintu ka socoto gobolka Sool.
Guddoomiyaha guddida diwaangelinta komishanka Ismaaciil Muuse Nuur oo haatan ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa Radio Horyaal u sheegay in ay galabta gobolkaasi u ambabaxeen 87 kooxood oo ka hawlgelaya goobihii hore u qorshaysnaa ee Komishanku kharashkooda hayey, isla markaana 60 kooxood oo ah goobihii dheeraadka ahaa ee kharashkooda ay bixinaysay Xukuumaddu ay iyaguna diyaar u yihiin in ay baxaan ilaa caawa.
Guddoomiyaha guddida diwaangelinta Ismaaciil Muuse Nuur wuxuu sheegay in goobaha diwaangelinta ee gobolka Sool oo ah 160 goobood ay ku jiraan goobaha diwaangelinta degmada Buuhoodle, isaga oo sheegay guddoomiyuhu in gudaha degmada Buuhoodle oo ay ka dhacayso diiwaangelintu, isla markaana ay haatan xubnaha Komishanka qaranka oo fadhigoodu yahay Magaalada Burco ay ka tashanayaan ‘ayuu yidhi’ codsi ka yimi degmada Buuhoodle oo ka cabanaya goobaha oo ku yar. Waxaana guddoomiyuhu uu sheegay in gobolka Sool looga diyaargaroobay diwaangelinta, qaybna laga siiyay gaadiidka iyo hawl wadeenada diwaangelinta.
Gobolka Sool oo diiwaangelintu ka bilaabmayso Jimcaha, 2/01/2009 ayaa noqonaya gobolkii ugu dambeeyay ee diwaangelinta, iyada oo shan gobol hore looga qabtay diwaangelinta.